ရှောင်းကျန့် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှောင်းကျန့် ( တရုတ် : 肖战၊ အောက်တိုဘာလ ၅ရက် ၁၉၉၁ မွေးဖွား၊ အခြားအမည် : ရှောင်ရှောင်) သည် တရုတ်လူမျိုး သရုပ်ဆောင်နှင့် အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး X NINE အမည်ရအမျိုးသားအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ရှောင်သည် Oh! My Emperor (၂၀၁၈) နှင့် The Untamed (၂၀၁၉) ဇာတ်လမ်းတွဲတို့တွင် လူသိများလာခဲ့သည်။
(1991-10-05) ၅ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၉၁ (အသက် ၂၈)
ရှောင်ရှောင် (Sean Xiao)
၂၀၁၅ - ယခု
၂.၁ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၈
၂.၂ ၂၀၁၉ - ယခု
၅ ဆုများနှင့် ဆန်ခါတင်စာရင်းများ
ရှောင်ကို အောက်တိုဘာလ ၅ရက် ၁၉၉၁ တွင် ချုံချင့်မြို့ ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရှောင်သည် ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကပင် ပုံဆွဲခြင်းနှင့် တယောတီးခြင်းတို့ကို သင်ယူခဲ့သည်။ ရှောင်သည် Modern International Art Design Academy of CTBU (Chongqing Technology and Business University) တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်တက်နေချိန်အတွင်း၌လည်း သံပြိုင်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ရှောင်သည် ၎င်း၏ အနုပညာအလုပ်များမစတင်ခင်အချိန်တွင် ဓာတ်ပုံဆရာနှင့် ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ပြင်ဆင်
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရှောင်းကျန့်သည် X-Fire Realiy Program တွင် အခြားသင်တန်းသား (၁၅)ဦးနှင့်အတူ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် Recording Program တစ်ခုဖြစ်သည့် Tencent မှ စီစဉ်သော Teen Channel တွင်လည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ရှောင်၏ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် Zhejuang တီဗီ၏ နှစ်သစ်ကူးပွဲအစီအစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုပွဲတွင် ရှောင်သည် "Freeze" နှင့် "Be A Man" သီချင်းတို့ကို အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည်။
ရှောင်သည် အခြားသင်တန်းသား (၈)ဦးနှင့်အတူ X NINE အမျိုးသားအဖွဲ့ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထိုအဖွဲ့တွင် အဓိကအဆိုရှင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ X NINE အဖွဲ့သည် ၎င်း၏ အသေးစားအယ်လ်ဘမ် X Jiu ကို စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၆ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရှောင်သည် စိတ်ကူးယဉ်ဝက်ဘ်ဒရာမာကားတစ်ခုဖြစ်သည့် Super Star Academy တွင် အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်အတွင်းမှာပင် ရှောင်သည် အချိန်ခရီးသွားအချစ်ဒရာမာကားတစ်ခုဖြစ်သည့် Shuttle Love Millennium တွင် အသေးစားပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ရှောင်သည် နန်းတွင်းအချစ် ဝက်ဘ်ဒရာမာဖြစ်သည့် Oh! My Emperor တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲသည် ဟာသနှင့် အချစ်ကို အခြေခံသည့် ဇာတ်သွားကြောင့် လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ရှောင်သည် ထိုဇာတ်လမ်းတွဲတွင် မင်းသားဇာတ်ရုပ်ဖြင့် လူသိများခဲ့သည်။ ရှောင်သည် ထိုဇာတ်လမ်းတွဲ၏ တေးသီချင်းဖြစ်သော "Stepping on Shadows" ကိုလည်း သီဆိုခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ထဲမှာပင် ရှောင်သည် စိတ်ကူးယဉ်အက်ရှင်ဒရာမာတစ်ခုဖြစ်သည့် Through The Heavens နှင့် နန်းတွင်းဒရာမာတစ်ခုဖြစ်သည့် The Wolf တို့တွင်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ - ယခုပြင်ဆင်
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရှောင်သည် Mo Dao Zu Shi ဝတ္ထုကိုအခြေခံထားသည့် The Untamed တွင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် အခြားအမျိုးသားဇာတ်ဆောင် ဝမ်ယိပေါ်နှင့်အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရှောင်နှင့် ဝမ်သည် ၎င်းဒရာမာ၏ တေးသီချင်းဖြစ်သော "Unrestrained" ကိုလည်း သီဆိုခဲ့ကြသည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ရှောင်၏ ပီပြင်သောသရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် ကောင်းမွန်သော မှတ်ချက်များရရှိခဲ့ပြီး ပိုမိုရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ထဲမှာပင် ရှောင်သည် Jade Dynasty ရုပ်ရှင်တွင် ဇန်ရှောင်ဖန်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလတွင် ရှောင်သည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယို "XZ Studio" ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရှောင်ဇန်သည် Forbes China ၏ လူကြိုက်များအောင်မြင်ကျော်ကြားသော အသက် ၃၀ အောက်လူငယ် ၃၀ ကို ရွေးချယ်သော "30 Under 30 Asia 2019" စာရင်းတွင် ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၂၀၁၈ Monster Hunt2捉妖记2 Little demon Cameo appearance|Cameo 
၂၀၁၉ The Rookies 素人特工 ယွမ်ဂျင်လင် 
Jade Dynasty 诛仙 ဇန်ရှောင်ဖန် 
၂၀၁၆ Super Star Academy 超星星学园 Fang Tianze 
Shuttle Love Millennium 相爱穿梭千年2：月光下的交换 Boss Liang Cameo 
၂၀၁၈ Oh! My Emperor 哦！我的皇帝陛下 Beitang Moran 
Battle Through the Heavens 斗破苍穹 Lin Xiuya 
၂၀၁၉ The Untamed 陈情令 ဝေ့ဝူရှန် 
Joy of Life 庆余年 Yan Bingyun 
TBA The Wolf 狼殿下 Ji Chong 
Douluo Continent 斗罗大陆 Tang San
The Oath of Love 余生，请多指教 Gu Wei 
၂၀၁၅ Eighteen 十八岁 ရှောင်ဇန်
Shi Lian Dian Chang Ji 失恋点唱机 ချန်၏ ရည်းစားဟောင်း
Shao Nian Zi Jiu Fang Huo Qiang 少年自救防火墙
၂၀၁၆ Warrior Spirit 骑士精神 လေစစ်သည်တော်
၂၀၁၉ Feel The World 慢游旅行家 
၂၀၁၈ "Stepping on Shadows" 踩影子 Oh! My Emperor OST 
"Battle Through the Heavens" 斗破苍穹 Battle Through the Heavens OST with Wu Jiacheng, Peng Chuyue & Gu Jiacheng 
၂၀၁၉ "Unrestrained" 无羁 The Untamed (web series)|The Untamed OST with ဝမ်ယိပေါ် 
"Song Ends with Chen Qing" 曲尽陈情 
"Asking Youth" 问少年 Jade Dynasty OST 
၂၀၁၉ "My Motherland and I" 我和我的祖国 Youth for the Motherland Singing Project for People's Republic of China’s 70th anniversary 
"My Chinese Heart" 我的中国心 
"The Best Summer" 最好的夏天 
၂၀၁၆ 16th Top Chinese Music Awards Most Popular New Idol N/A ဆန်ကာတင်
Tencent Video Star Award Best New Actor Super Star Academy ဆန်ကာတင်
၂၀၁၈ 25th Cosmo Beauty Ceremony Beautiful Idol of the Year N/A ဆုရရှိ 
12th Tencent Video Star Awards DOKI Popularity Award N/A ဆုရရှိ 
၂၀၁၉ China Celebrity Charity Gala Philanthropy Award N/A ဆုရရှိ 
6th The Actors of China Award Ceremony Best Actor (Web series) The Untamed (web series)|The Untamed ဆန်ကာတင် 
3rd Yinchuan Internet Film Festival ဆန်ကာတင်
Golden Tower Award Most Popular Actor ဆုရရှိ 
↑ 《捉妖记2》曝阵容 七大群星领衔加盟新捉妖天团 (in zh) (28 November 2016)။
↑ 《素人特工》曝王大陆&肖战跑酷片段 (in zh) (4 July 2019)။
↑ zh:有怪兽！《诛仙》定档9.12首发预告 肖战李沁孟美岐唐艺昕决战鬼王宗 (in zh) (July 23, 2019)။
↑ 《超星星学园》今日开播 来体验跟燃少当同学！ (in zh) (29 September 2016)။
↑ 湖南卫视《相爱2》圆满收官 "轮回式结局"赢口碑 (in zh) (30 December 2016)။
↑ 《哦！我的皇帝陛下》定档4月25日 古装盐甜陪你下饭 (in zh) (13 April 2018)။
↑ 《斗破苍穹》定档9月3日 吴磊林允相约开学季 (in zh) (27 August 2018)။
↑ 《陈情令》首曝剧照 肖战王一博掀仙侠风云 (in zh) (5 July 2018)။
↑ 《庆余年》肖战帅气亮相 谈角色：宠辱不惊 (in zh) (26 January 2018)။
↑ 《狼殿下》发预告 李沁王大陆肖战情陷三角虐恋 (in zh) (28 August 2017)။
↑ 《余生，请多指教》全阵容海报曝光 杨紫肖战主演 (in zh) (15 August 2019)။
↑ 肖战《慢游旅行家》厦门站正片上线 (in zh) (September 30, 2019)။
↑ 雅诗兰黛×肖战口红微电影第二集：请你继续勇敢表达自己 (in zh) (October 2019)။
↑ 《哦！我的皇帝陛下》插曲《踩影子》Mv上线 (in zh) (28 April 2018)။
↑ 《斗破苍穹》片尾曲MV曝光 X玖少年团唱响破世之战 (in zh) (August 29, 2018)။
↑ 肖战新歌《满足》MV上线 温暖发声感恩粉丝支持 (in zh) (November 16, 2018)။
↑ 《诛仙Ⅰ》曝主题曲《问少年》MV 肖战热血开唱 平凡少年历经坎坷坚韧成长 (in zh) (September 12, 2019)။
↑ 李谷一领衔演唱《我和我的祖国》 共青团中央首发礼赞祖国70华诞 (in zh) (September 30, 2019)။
↑ 《我的中国心》发布 肖战深情唱响赤子“中国心” (in zh) (October 4, 2019)။
↑ 太养眼！肖战宋祖儿合体拍校园风大片颜值爆满 (in zh) (October 21, 2019)။
↑ 2018COSMO时尚美丽盛典闪耀绽放 (in zh) (November 29, 2018)။
↑ 腾讯视频星光盛典：Baby美杨超越萌，老戏骨们最有范儿 (in zh) (December 18, 2018)။
↑ 慈善名人盛典颁奖礼群星璀璨，"2018慈善名人榜"隆重发布 (in zh) (March 27, 2019)။
↑ “好演员”候选名单：肖战李现赵丽颖杨紫等入围 (in zh) (October 16, 2019)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှောင်းကျန့်&oldid=497657" မှ ရယူရန်
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၁:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၁:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။